Mogadishu Journal » 2020 » August » 14
Magaalada Dhuusamareeb oo laga dareemayo u diyaar garowga Shirka Dhuusamareeb 3
Waxaa magaalada Dhuusamareeb laga dareemayaa u diyaar garowga shirkii Dhuusamareeb 3, kaas oo lagu balansanaa inuu dhaco 15 bishan August. Waxaa laga dareemayaa magaalada Dhuusamareeb, dhaq dhaqaaqyo ay sameynayaan ciidamada Ammaanka, kuwaas oo ay ku xaqiijinayaan amniga guud ee...
Dawlada Turkiga oo si adag uga hadashay xariirka Imaaraatka iyo Israa’iil
Dawladda Turkiga ayaa waxa ay si adag uga hadashay xiriirka cusub ee ay sameysteen Imaaraatka Carabta iyo Israa’iil. Waxa ay sheegtay in xiriirkani cusub ee ay wada gaadheen, uu yahay mid lagu khiyaanayo shacanka reer Falastiin. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga, oo ka...
Mareykanka oo la wareegay Markab Saliid siday oo laga lahaa Iran
Mareykanka ayaa la sheegay in uu la wareegay Markab nooca Xamuulka qaada oo ay lahayd dawlada Iran. Markabkan ayaa waxaa la sheegay in uu siday Saliid, oo uu ku wajahnaa dalka Venezuala, balse uu Mareykanku la wareegay. Waxa uu arrintan ku sababeeyay Mareykanku in uu Markabkani...
Taliska Hawlgallada Ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika, ee magacooda loo soo gaabiyo AFRICOM, ayaa sheegay in Saraakiil ka tirsan Al-Shabaab ay u geeriyoodeen cudurka COVID-19. Warbixintan ka soo baxday AFRICOM ayaa waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka u sheegtay in...
Madaxweyne Farmaajo Oo Baarlamanka Hortagi Doona Iyo U Jeedka
Xildhibaanadda Golaha Shacabka ayaa maalinta berito ah kulan ku leh xarruuntooda ay ku shiraan ee Villa Hargeysa. Kulanka oo lagu war galiyay Xildhibaanada ayaa waxaa la filayaa in uu qabsoomo berri oo Sebti ah. Agendaha kulanka ayaa ah Warbixin Madaxweynaha JFS u jeedinayo...
Ciidanka Kumaandooska Danab ayaa la wareegay degmadda Kuntuwaareey ee gobolka Shabeellaha hoose, halkaasi oo ay ku sugnaayeen dagaalamayaal ka tirsan Alshabaab. Ciidanka Danab ayaa nolosha ku qabtay sida ay sheegteen Xubin sare oo Al-shabaab kamid ah, waxaana kuntuwaareey...
Agaasimihii madaxtooyada Soomaaliya oo shaqadii iskaga tagay
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in uu shaqadii joojiyay agaasimihii madaxtooyada Soomaaliya Dr.Nuur Diiriye Fuursade, sida mogadishu journal ay u xaqiijiyeen ilo lagu kalsoon yahay. Dr. Fuursade, ayaa ahaa agaasimihii madaxtooyada Soomaaliya mudo sanad ah, balse hadda shaqadii ka...
The United Arab Emirates has become the first Gulf Arab country to reach a deal on normalising relations with Israel, capping years of discreet contacts between the two countries in commerce and technology. The so-called “Abraham Agreement”, announced...
Muqdisho – Guddoomiyaha goblka Banaadir ahna duqa Magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Filish ayaa sheegay in Maamulka Gobolka Banaadir uu ka Shaqeyn doono in Magaalada Muqdisho ay ka dhacdo doorasho qof iyo Cod ah. Waxaa uu sheegay in Dowladda Soomaaliya ay fursad siin...
Muqdisho :-Saraakiil ka tirsan Xarakada Al-Shabaab ayaa u geeriyooday cudurka safmarka ah ee Coronavirus/Covid-19, oo muddooyinkii dambe si weyn ugu faafay dunida, sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada Mareykanka. Taliska ciidamada Mareykanka ee qaarada Afrika ee AFRICOM ayaa...
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye ayaa maanta dib ugu laabtay Caasimadda Galmudug kaddib socdaal hawleed oo qaatay labo isbuuc ah oo uu kaga maqnaa deegaannada Galmudug. Wefdiga Madaxweynaha Galmudug waxa garoonka diyaaradaha Ugaas Nuur kusoo dhaweeyay...